Docker vs Kubernetes: tombony sy fatiantoka ny roa | Avy amin'ny Linux
La lasa fomba fanao mahazatra tokoa ny virtualisation, indrindra amin'ny serivisy rahona hahafahanao mivoaka bebe kokoa amin'ireo mpizara ao amin'ny foibe angon-drakitra. Saingy tato ho ato, ny virtualization miorina amin'ny fitoeran-javatra no apetraka, satria mamela fitantanana mahomby kokoa (amin'ny alàlan'ny tsy fanarahana doka sasany) Ary amin'ity tendro ity no mipoitra ny ady Docker vs Kubernetes.
Tetikasa roa tena malaza, izay efa fantatrao angamba. Samy miaraka ny tombony sy ny fatiantoka ary ny fahasamihafana izany dia mety ho fanalahidy rehefa manampy anao hisafidy tetikasa iray arak'izay ilainao ...
1 Inona no atao hoe virtualization-based container?
2 Inona no atao hoe Docker?
3 Inona ny Kubernetes?
4.1 Ny tsy fitovian'ny Docker vs Kubernetes
4.4 Docker vs Kubernetes: famaranana
Inona no atao hoe virtualization-based container?
Araka ny fantatrao, misy maromaro karazana virtualizationtoy ny virtualization feno, paravirtualization, sns. Eny, amin'ity fizarana ity dia hifantoka amin'ny virtualization feno izay ampiasaina amin'ny ankapobeny rehefa mametraka milina virtoaly, sy kaontenera, mba tsy hampidirina miova hafa izay mety hampifangaro anao.
Masinina virtoaly- Fomba fanatanterahana virtoaly afovoany. Miorina amin'ny hypervisor, toy ny KVM, Xen, na programa toa ny VMWare, VirtualBox, sns. Miaraka amin'ity rindrambaiko ity dia maka tahaka ny masinina ara-batana iray manontolo (vCPU, vRAM, kapila kapila, tambajotra virtoaly, periferal, sns.). Noho izany, ny rafitra miasa (vahiny) dia azo apetraka amin'ity fitaovana virtoaly ity ary avy eo, ny fampiharana dia azo apetraka ary mihazakazaka amin'ny fomba mitovy amin'izay hatao ao amin'ny rafitra fiasa fampiantranoana.
fitoeran: Teknolojia iray hafa izay misy karazana tranom-borona na boatin-fasika izay ampidirina amina faritra sasany amin'ity rafitra feno ity, izay mahomby kokoa ary misy tombony azo amin'ny portability sy fiarovana fanampiny (na dia tsy afaka amin'ny marefo) . Raha ny marina, raha tokony hanana hypervisor ianao, amin'ireto tranga ireto dia misy rindrambaiko toa an'i Docker sy Kubernetes izay hampiasa ny rafitry ny mpampiantrano mihazakazaka fampiharana mitoka-monina. Ny lafy ratsy dia mamela anao hametraka fampiharana teratany avy amin'ny OS mpampiantrano fotsiny ianao. Izany hoe, raha ao anaty VM dia azonao atao ny manao virtoaly ny Windows amin'ny distro Linux, ohatra, ary amin'io Windows io dia azonao atao ny mampihatra rindranasa zanatany ho azy, ao anaty kaontenera iray no ahafahanao manao izany amin'ny fampiharana tohanan'ny rafitry ny mpampiantrano, amin'ity. raharaha amin'ny Linux ...
Tadidio fa fanitarana na fanampiana fananganana virtoaly fitaovana, satria Intel VT sy AMD-V dia nahavita nanatsara ny zava-bita be dia be, mieritreritra 2% fotsiny ho an'ny CPU. Saingy tsy mihatra amin'ny loharanom-pahalalana hafa toy ny fahatsiarovana na ny fitehirizana azy manokana natokana ho an'ny virtualization feno, izay midika hoe fitakiana loharano lehibe.
Izany rehetra izany no tonga hamahana ny kaontenera, izay tsy mila mandika dingana sasany hahafahana mametraka fampiharana. Ohatra, raha te-hamorona kaontenera misy mpizara Apache ianao, miaraka amin'ny masinina virtoaly feno dia hanana ny rafitra fiasan'ny mpampiantrano ianao, ny hypervisor, ny rafitry ny mpitsidika ary ny rindrambaiko ho an'io serivisy io. Etsy ankilany, amin'ny kaontenera dia tsy maintsy manana ilay rindrambaiko mampihatra ilay serivisy ianao, satria handeha ao anaty "boaty" mitokana sy mampiasa ny rafitra fampiasan'ny mpampiantrano mihitsy. Ankoatr'izay, haingana kokoa ny fanombohana ny fampiharana, amin'ny alàlan'ny fanafoanana ny OS vahiny.
Inona no atao hoe Docker?
Docker dia tetikasa loharano misokatra, eo ambanin'ny fahazoan-dàlana Apache, voasoratra amin'ny fiteny fandaharana Go ary ampiasaina hamerenana amin'ny laoniny ny fametrahana ny fampiharana ao anaty kaontenera. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ity rindrambaiko ity dia hamela anao hitantana kaontenera amin'ny rafitra fiasa samihafa, satria miasa amin'ny sehatra maro izy io.
Rehefa niseho i Docker, nanana tombony maro, ary niely haingana izy io. Ny fahitana mitokana momba ny rafitra fiasa sy ny fahatsorana, avela hanamboatra kaontenera misy fampiharana, hampihatra azy ireo, handanjalanja azy ireo ary hanatanteraka azy ireo haingana. Fomba iray handefasana ny fampiharana rehetra ilainao amin'ny fanjifana loharanom-pahalalana faran'izay kely indrindra.
Raha fintinina dia manolotra ireto manaraka ireto i Docker toetra lakile:
Mitokana amin'ny tontolo iainana.
Fitantanana ny kaontenera.
Fanaraha-maso ny kinova.
Toerana / fiarahana.
fa Tsy afaka tamin'ny olana sasanyToy ny rehefa mila mandrindra ireo kaontenera ireo dia mifampiresaha. Izany no iray amin'ireo antony nahatonga ny famoronana Kubernetes ...
Araka ny hilazako hevitra avy eo Docker andiam-be, Te-hilaza aho fa rindrambaiko noforonin'ireo mpamorona Docker iray ihany izy io mba hahafahana manangona andiana mpampiantrano Docker ao anaty vondrona iray ary hitantana ny clusters eo afovoany, ankoatry ny fandaminana ireo kaontenera.
Misimisy kokoa momba an'i Docker
Google no namorona azy tamin'ny voalohany, ary avy eo dia natolotra ho an'ny Cloud Native Computing Foundation. Kubernetes Izy io koa dia rafitra toa an'i Docker, loharano misokatra, nahazo alalana tamin'ny Apache, ary nosoratana tamin'ny fampiasana ny fiteny Go program. Izy io dia ampiasaina hanamafisana ny fametrahana sy ny fitantanana ny fampiharana containerized. Ankoatr'izay dia manohana tontolo iainana samihafa ho an'ny kaontenera mihazakazaka, anisan'izany i Docker.
Farany, Kubernetes dia a rig orkestra kaontenera izay tompon'andraikitra amin'ny fanampiana ireo kaontenera samihafa amin'ny masinina samihafa, ny fitantanana azy ireo ary ny fizarana entana eo anelanelany. Io fikambanana io indrindra no nahatonga an'ity tetikasa ity ho ampahany lehibe amin'ireo karazana scenario ...
Fandaharana mandeha ho azy.
Rollouts mandeha ho azy sy ny fametrahana azy.
Loza fandanjana sy mizana.
Haavo avo kokoa ny fampiasana loharano.
Function mifototra amin'ny tontolon'ny orinasa.
Fitantanana fampiharana feno.
Fotodrafitrasa azo ovaina samirery.
Bebe kokoa momba an'i Kubernetes
Araka ny hitanao amin'ny famaritana, dia samy nitovy tamin'ny fomba maro izy roa, saingy manana ianao ny tsy fitovizany, ary koa ny fananana tombony sy fatiantoka toy ny zava-drehetra. Mety hieritreritra ianao fa ny fahalalana ireo antsipiriany ireo dia hanana ny zavatra rehetra ho fantatrao hoe iza no tokony hofidinao, miankina amin'ny tanjona azonao.
Na izany aza, ny olana zavatra sarotra kokoa noho io. Tsy momba an'i Docker vs Kuernetes izany, satria ho toy ny mampitaha zavatra tena samihafa izy io ary hianjera amin'ny hadisoana amin'ny fieritreretana fa tokony hifidy ny iray sy ny iray hafa. Ny valin'ny Docker vs Kubernetes dia tsy mitombina, fa tokony hamatotra ny teknolojia roa tonta ianao hahafahana mandefa sy mandanjalanja ny fampiharana containerized amin'ny fomba tsara kokoa.
Ny tena mety dia ny mampitaha Docker Swarm miaraka amin'i Kubernetes. Hahomby kokoa izany, satria Docker Swarm dia teknolojia orkestra Docker ho an'ny famoronana cluster ho an'ny kaontenera. Na dia, na dia izany aza dia tsy hahomby tanteraka ... Raha ny tena izy, Kubernetes dia noforonina mba hihazakazaka ao anaty vondrona iray, afaka mandrindra ny vondron'ireo node amin'ny ambaratonga amin'ny famokarana mahomby, raha Docker kosa manao azy amin'ny fomba tokana.
Ny tsy fitovian'ny Docker vs Kubernetes
Mitahiry ireo tsy mitovy, raha tianao ho fantatra ny fahasamihafana eo anelanelan'ny Docker Swarm sy Kubernetes, izy ireo dia:
Kubernetes dia misy safidy maro ho an'ny personalization tsy ampy amin'ny Docker Swarm.
Docker Swarm dia mora kokoa hamboarina noho ny fahatsorany. Ho fanampin'izany, mora kokoa ihany koa ny fampidirina amina tontolo iainana Docker.
Any cambio, ny Fandeferana amin'ny fahadisoana Kubernetes dia avo kokoa, izay mety ho tsara kokoa amin'ny tontolo iainana toy ny mpizara tena misy.
Docker Swarm dia haingana mikasika ny fametrahana sy fanitarana kaontenera.
Kubernetes ho an'ny anjarany antoka lehibe kokoa mankany amin'ny fanjakana cluster.
El fandanjana entana ao Kubernetes dia mamela fifandanjana tsara kokoa izy io, na dia tsy mandeha ho azy toy ny any Docker aza izany.
Manolotra i Kubernetes malefaka kokoa, na dia amin'ny fampiharana sarotra aza.
Docker Swarm dia manohana hatramin'ny 2000 node, raha ampitahaina amin'ny 5000 ao Kubernetes.
Kubernetes dia optimisé ho an'ny sampahony kely maro, raha Dockers kosa ho an'ny sampahom-boaloboka lehibe.
Kubernetes dia sarotra, Docker tsotra kokoa.
Kubernetes afaka mamela zarao ny toerana fitahirizana eo anelanelan'ny kaontenera rehetra, raha toa ka voafetra kokoa ny Docker ary zarain'izy rehetra ihany no zaraina eo amin'ny kaontenera iray ihany.
Docker Swarm mamela hampiasa rindrambaiko fahatelo ho an'ny fitrandrahana ala sy fanaraha-maso, Kubernetes dia ahitana ny fitaovana ao anatiny ao anatiny.
Voafetra hatrany amin'ny 95.000 ny Docker Swarm fitoeran, raha i Kubernetes dia afaka manohana hatramin'ny 300.000.
Raha manana i Docker fiaraha-monina lehibe Kubernetes dia tohanan'ny orinasa toa Microsoft, Amazon, Google, ary IBM ihany koa.
Docker dia ampiasain'i orinasa toy ny Spotify, Pinterest, eBay, Twitter, sns. Raha aleon'i Kubernetes ny 9GAG, Intuit, Buffer, Evernote, sns.
Nahita divergences vitsivitsy, dia anjaran'ny ny tombony tsirairay:
Fandaminana mora ny serivisy miaraka am-polony.
Namboarin'i Google, manana traikefa lehibe amin'ny indostrian'ny rahona.
Fivondronan'ny orkestra lehibe sy vondron-kaontenera lehibe.
Safidy isankarazany fitehirizana, ao anatin'izany ny SAN eo an-toerana sy ny rahona ampahibemaso.
Fanamboarana voalohany mahomby sy mora.
Mandeha ireo kinova fitoeran-kaontenera handinihana ireo fiovaovana.
Antontan-taratasy tena tsara.
Mitoka-monina tsara eo amin'ny fampiharana.
Raha ny amin'ny ny fatiantoka:
Fifindra-monina sarotra kokoa.
Fametahana sy fametrahana dingana sarotra.
Tsy mifanaraka amin'ny fitaovana Docker efa misy.
Sarotra ny fampiharana cluster amin'ny tanana.
Tsy manome safidy fitehirizana.
Tsy misy famerenana fandaharana mandeha ho azy ny teboka tsy miasa.
Ny hetsika dia tokony hatao ao amin'ny CLI.
Fitantanana tanana ny tranga maro.
Mila fanampiana amin'ny fitaovana hafa ianao.
Fampielezana cluster amin'ny tanana sarotra.
Tsy misy fanampiana amin'ny fizahana fahasalamana.
Docker dia orinasa mitady tombom-barotra ary ny sasany amin'ireo singa manakiana azy, toy ny Docker Engine sy Docker Desktop, dia tsy loharano misokatra.
Docker vs Kubernetes: famaranana
Araka ny azonao an-tsaina, tsy mora ny misafidy eo anelanelan'ny iray na ny iray hafa. Ny ady Docker vs Kubernetes dia sarotra kokoa noho ny mety ho izy. Ary ny zava-drehetra dia miankina amin'ny tanjona azonao. Ny iray na ny hafa hifanaraka tsara kokoa, ary izany no tokony ho safidinao.
Amin'ny tranga maro hafa, ny fampiasana Kubernetes miaraka amin'i Docker no ho tsara indrindra amin'ny safidy rehetra. Miara-miasa tsara ireo tetikasa roa ireo. Izany dia afaka manatsara ny fiarovana ny fotodrafitrasa sy ny fahafaha-manana fampiharana. Azonao atao mihitsy aza ny manao ny apps ho azo ovaina kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Docker vs Kubernetes: tombony sy fatiantoka
Misaotra betsaka ! Nanjary nazava kokoa tamiko, ary ambonin'izany rehetra izany dia ny mahatakatra fa toy ny amin'ny fotoana maro, tsy misy tsara kokoa na ratsy kokoa, raha tsy resaka fisafidianana izay mety indrindra.
Angamba mila ohatra mazava kokoa fotsiny aho mba hahalalako izay toe-javatra iray na iray hafa miasa tsara kokoa, ary amin'ny toe-javatra toy izany no hampiasana azy ireo miaraka.
Ary, inona no safidy hafa ananantsika amin'ity karazana rindrambaiko ity?
Ary inona no fampiasana azontsika izay manomboka mahafantatra momba ny kaontenera, hahita tranga tena izy nefa tsy miandry miasa amin'ny orinasa lehibe?
Erikson Melgarejo dia hoy izy:
Heveriko fa misy zavatra voafaritra tsy mety eto, mpitantana kaontenera i docker, tsy azo ampitahaina amin'ny Orchestrator izany.
Ny fampitahana dia eo amin'ny Docker Swarm vs Kubernetes.
Toa nandritra ny fanaovana an'ity lahatsoratra kanto ity (tena mahaliana ahy raha ny fahitako azy), nisy teny sasany nolavina.
Valiny tamin'i Erikson Melgarejo
Febroary 2021: Ny tsara sy ny ratsy ary ny mahaliana an'ny Free Software
Manazava ny zavatra hitranga ny WhatsApp raha tsy manaiky ny fepetra vaovao amin'ny serivisy izy ireo